I-MIRSINI Hotel Beautiful Room eCrete - I-Airbnb
I-MIRSINI Hotel Beautiful Room eCrete
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguPetros
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uPetros iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Amagumbi wethu athandekayo angama-31 aziimitha ezimbalwa kuphela ukusuka kunxweme lwethu olucocekileyo olunesanti kunye neebhloko ezimbalwa ukusuka kumbindi wedolophu. Ukuphumla, ukuthenga, ukutya, ukubona ukubona kunye nolunye ukhetho oluninzi luyafumaneka xa ulapha.
Ukongeza, ukuze wenze okuninzi kwiholide yakho, sinikezela ngeeseshoni zabucala kunye neqela kude kube phakathi ku-Okthobha ka-2019 ngo:
* Ukuqeqeshwa koBomi
* Ukupheka (Isidlo semveli sasekhaya kunye neMeditera)
* IKite Surfing
I-Mirsini yintsapho ebaleka, ihotele efudumeleyo nenobubele, ekwikona entle yedolophu yaseAgios Nikolaos!
Ime kufutshane nolwandle olunentlabathi nolucoceke kakhulu, umgama weemitha eziyi-700 kuphela ukusuka embindini wedolophu, indawo yezibuko, ichibi elihle, iCentral Bus Station, iHostpital, Ifama kunye nemyuziyam yeMbali yedolophu yaseAgios Nikolaos.
Kukho iivenkile zokutyela ezininzi, iikhefi kunye neebhari ezikufutshane, kunye neevenkile ezinkulu zazo zonke iintlobo zeemfuno.
Isakhiwo sinamagumbi ayi-31 aphindwe kathathu, anendawo yokubuka ulwandle okanye igadi, igumbi lokuhlambela, ifowuni, i-tv+ i-satelite, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, ifriji, i-intanethi yasimahla nendawo yokupaka esimahla.
Kukho indawo yokwamkela iindwendwe/inkonzo yokufaka ikhowudi emnyango, indawo yokutyela isidlo sakusasa neendawo zokuphumla ze-TV.
Amagumbi ethu anikezela ngayo yonke into oyinqwenelayo ngexabiso elihle emarikeni ukuze iholide yakho ibe njengephupha elimnandi!
Apha eMirsini, sonke sizama ukwenza iiholide zakho zibe mnandi kwaye zingalibaleki kangangoko kunokwenzeka!
4.51 · Izimvo eziyi-146
Unokuchitha usuku lwakho kunxweme olukufutshane (iimitha ezingama-50 kude), okanye uthathe uhambo (ngaphantsi kwemizuzu eyi-10) ukuya embindini, echibini nakwindawo yezibuko ukuba ufuna ukujikeleza xa ufuna ukuthenga, ukutya, njl. Zininzi iindawo zokutyela. , iibhari, iikhefi, iivenkile, iibhanki, iifama, iimarike ezinkulu kwi-radius ye-1Km, zonke zifikeleleka lula ngeenyawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Petros
Senza zonke iindwendwe zethu zizive zisekhaya! Sinikezela ngalo lonke ulwazi malunga neendawo ezilungileyo zokutyelela, iilwandle, iindawo zakudala, iindawo zokutyela, ii-tavernas, imisebenzi, njl.